REHEFA ANY AMBANIVOHITRA (TAPANY II) – Blaogin'i Voniary
Hoy angamba ianao hoe : « raha ampirimiko ny « écouteur » sy ny finday, ilaozako ny Facebook, dia inona izany no andaniako andro ? » Betsaka ny zavatra azonao atao, ampy ialana voly sady mampivelatra ny saina.
TRANDRAKA AN-TANIMENA, NY VOLON-TANY NO ARAHANY
Marina fa tsy mitovy amin’ny fiainanao andavanandro ny any ambanivohitra. Izany indrindra anefa no tokony hararaotinao mba itrandrahana traikefa vaovao. Voalohany amin’izany ny fiezahana mba ifangaro amin’ireo mponina. Mahatsara ny fahasalamana ny mandeha tongotra eny ambony bozaka, vatovato, fasika sy ny sisa. Ny fikasohan’ny faladia amin’ny bozaka dia manampy ny fikorinan’ny rà ho ara-dàlana sady mampihena ny fikorontanan-tsaina. Koa ampirimo ny « tennis » sy ny « ballerine » rehefa any dia mbà manaova kapakapa toy ny olona rehetra e! Rehefa mahita toerana madio, misy bozaka, vatokely, fasika dia mba andràmo ny manala kapa. Toy izany koa ny fitafy, ny olona mahalala fomba sy mahay miaina dia misalotra akanjo mifanaraka amin’ny toerana sy ny fotoana. Raha mamonjy fanasana ianao, moa tsy manao irony akanjo mianjaika irony. Raha any amin’ny toeram-piasana ianao, moa tsy misalotra akanjo mihaja. Tsy hitondra ny fitafiana fanao amin’ny fanasana ho any am-piasana mihitsy ianao. Mba ataovy toy izany koa rehefa any ambanivohitra, tsy voatery hoe hitovy amin’ny mponina any ianao, fa mba mitafia akanjo maivana tsy be filirony izay mampahazo aina anao.
IRAY PETSAPETSA SY IRAY DONAK’AFO
Ahazoanao tombon-tsoa ihany koa ny fandraisana anjara amin’ny raharaha fanaon’ny mponina andavanandro. Diniho fa na ny havana avy any dilam-bato aza tonga aty amintsika mba hanandrana ao anatin’ny fotoana vitsy ny fiainan’ny tantsaha eny ambanivohitra. Izany no antsoina hoe « tourisme social et solidaire » satria sady manampy ny fidiram-bolan’ny tantsaha izy ireo no mamantatra azy ireo amin’ny maha-olona azy koa. Ary ahoana ny aminao ? Ireo olona eny ambanivohitra ireo dia havanao sy mpiray tanindrazana aminao. Koa miezaha mba mandray angady, manetsa, mantsàka, manondraka voly sy ny sisa. Ny fotaka ve no atahoranao ? Ny renirano sy ny lakan-drano eo akaiky afaka idiovanao rehefa avy eo. Vao tsy ela akory teto antananarivo no nisy hetsika « FOTAKA » izay nahasarika olona maro. Raha ny ho reraka indray ny atahoranao, fitaizam-batana sy fanatanjahan-tena vita ho azy ireny. Raha ny tsy fahaizanao indray no mampiahotra anao, eo ireo havana sy namana hampiseho anao ny fanaovana azy. Ary ny tena valisoa lehibe azonao dia ny fivelaran-tsaina sy ny fitomboan’ny fifankahazoana am-po eo aminao sy ireo havanao.
Tsy hitahitanao akory dia hariva ny andro rehefa mankafy mitrandraka ilay raharaha tsy fanaonao isan’andro ianao. Amin’ireny fotoana ireny, afaka maka sary kely ianao mba ho fahatsiarovana ifampizarana amin’ny havana.
ésotérisme gasy, fahaiza-miaina, fotaka, kolontsaina, maha-malagasy, malagasy